Indlela Yokuziphatha / Ukubuyekezwa Okusalungiswa - Meta
Indlela Yokuziphatha / Ukubuyekezwa Okusalungiswa
< Universal Code of Conduct(Redirected from Universal Code of Conduct/Draft review/zu)
This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Policy text and the translation is 16% complete.
3.3 3.3 - Ukucekela phansi okuqukethwe nokuxhashazwa kwamaphrojekthi
Le Mithetho Yokuziphatha Yomhlaba Wonke (i-UCoC) ichaza isisekelo sokuziphatha okwamukelekayo nokungamukeleki. Kusebenza kuwo wonke umuntu oxhumana naye futhi anikele kumaphrojekthi we-Wikimedia aku-inthanethi naku-inthanethi nezikhala. Lokhu kufaka ababambe iqhaza abasha nabanolwazi, abasebenza ngaphakathi kwamaphrojekthi, abahleli bemicimbi nababambiqhaza, abasebenzi kanye namalungu ebhodi ezinhlangano nabasebenzi beWikimedia Foundation namalungu ebhodi. Kusebenza kuyo yonke imicimbi yomuntu uqobo neminyakazo ebonakalayo, izikhala zobuchwepheshe, nawo wonke amaphrojekthi we-Wikimedia ne-wikis.
Sifuna le miphakathi ibe yindawo ekahle, ephephile futhi enempilo kunoma ngubani oyijoyinayo. Futhi, sifisa ukuvikela amaphrojekthi ethu kulabo abalimaza noma bahlanekezele okuqukethwe kwabo.
I-UCoC isebenza ngokulinganayo kubo bonke ama-Wikimedians ngaphandle kokuhlukile. Ukwenza ngokungqubuzana ne-UCoC kungaholela ekutheni unswinyo lubekwe abameleli bomphakathi kanye nabasebenza ezisekelweni (njengokuvunywa kwemiphakathi yasendaweni kanye nomongo) noma iWikimedia Foundation njengomnikazi wezinkundla ngokusemthethweni.
Ngokuhambisana nomsebenzi we-Wikimedia, bonke ababamba iqhaza kumaphrojekthi we-Wikimedia nezikhala bazo:
Siza ukudala umhlaba lapho wonke umuntu angabelana ngokukhululekile esilinganisweni salo lonke ulwazi.
ukubamba iqhaza emphakathini womhlaba wonke ozogwema ukwenzelela nokubandlulula, futhi
Lwela ukunemba nokuqinisekisa kuwo wonke umsebenzi wawo.
public and semi public interactions
spaces of public interaction and events, press conferences and professional convening
I-UCoC inikeza isisekelo sokuziphatha ngokubambisana kumaphrojekthi we-Wikimedia emhlabeni jikelele. Imiphakathi ingangeza kulokhu ukwenza izinqubomgomo ezibhekelela isimo sendawo nesiko, ngenkathi kugcinwa izisekelo ezibhalwe lapha njengezinga eliphansi.
Wonke umuntu wase-Wikimedian, noma ngabe bangumhleli omusha noma onolwazi, isisebenzi somphakathi, inxusa noma ilungu lebhodi le-WMF noma isisebenzi, sibhekene nokuziphatha kwabo.
Kuwo wonke amaphrojekthi we-Wikimedia, izikhala kanye nokuziphatha kwemicimbi kuzosungulwa ngenhlonipho, inhlalonhle, ubumbano, ubumbano kanye nokuba yisakhamuzi esihle. Lokhu kusebenza kubo bonke ababambiqhaza nabahlanganyeli ekusebenzisaneni kwabo nabo bonke ababambiqhaza nabahlanganyeli, ngaphandle kokwehlukanisa kususelwa ebudaleni, ukukhubazeka ngokwengqondo noma ngokomzimba, ukubukeka komzimba, ubuzwe, inkolo, ubuhlanga, namasiko noma isigaba, isigaba somphakathi, ukukhuluma ngokushelela kolimi, ukuthanda ezocansi , ubunikazi bobulili, noma inkambu yomsebenzi. Futhi ngeke sihlukanise ngokuya ngokufeziwe, amakhono noma ukuma kuma-Wikimedia-projects noma ukunyakaza.
Inhlonipho ukubonisa ukuhlonipha abanye. Ekuxhumaneni nabantu, kungaba ezindaweni ezi-inthanethi noma ezingaxhunyiwe ku-inthanethi ze-Wikimedia, sizobaphatha ngenhlonipho efanayo naleyo ebesingathanda ukuthi basibonise yona.
Lokhu kufaka kepha akukhawulelwe ku:
*Zijwayeze ukuzwelana. Lalela bese uzama ukuqonda ukuthi noma imaphi amaWikimedians kufanele akutshele ini. Yilungele ukuphonsela inselelo futhi uvumelanise ukuqonda kwakho, okulindelwe nokuziphatha njengoWikimedian.
Cabanga njalo ngokuthembeka okuhle, futhi uhlanganyele ekuhleleni okwakhayo, okuhle. Nikeza futhi wamukele impendulo ngomusa nangokuthembeka. Ukugxekwa kufanele kwethulwe ngendlela ebucayi, eyakhayo, futhi ibandakanye izindlela eziqinile, ezilinganisekayo zokwenza ngcono.
Hlonipha indlela abanikeli abazibiza ngayo futhi bazichaze ngayo. Abantu bangasebenzisa amagama athile ukuzichaza. Njengophawu lwenhlonipho, sebenzisa lawa magama lapho uxhumana nalaba noma mayelana nalaba bantu. Izibonelo zifaka:
Amaqembu ezinhlanga angasebenzisa igama elithile ukuzichaza, kunegama elisetshenziswe abanye ngokomlando ukuwachaza
Abantu abanamagama asebenzisa izinhlamvu ezihlukile, imisindo noma amagama avela olimini lwabo okungenzeka ukuthi awujwayeleki kuwe;
Abantu abakhomba inkanuko ethile yezocansi noma ubunikazi bobulili besebenzisa amagama ahlukile noma izabizwana;
Lapho sihlangana mathupha, sizolwela ukwamukela wonke umuntu futhi sizokhumbula futhi sihloniphe okuthandwa ngabanye, ukuqonda, amasiko kanye nezidingo.
Ubuntwana yizinga eliphakeme lokuziphatha okuhle nokukhuluma phakathi kwabantu, kufaka phakathi abantu ongabazi. Ubukoloniyali ukusekelwa kobungani abantu ababambe iqhaza emzamweni ofanayo abakunikezanayo. Ukuba yisakhamuzi esihle kusho ukuthatha umthwalo obonakalayo wokuqinisekisa ukuthi amaphrojekthi we-Wikimedia ayizindawo ezikhiqizayo, ezimnandi neziphephile okumele zibe kuzo, futhi afaka isandla kwi-Wikimedia Mission.
Lokhu kufaka kepha akukhawulelwe ku-
Ukwelulekwa nokuqeqeshwa: Ukusiza abafikayo ukuthi bathole indlela yabo futhi bathole amakhono abalulekile
Khombisa ubumbano: Bheka abanye ohlanganyele nabo, ubanike isandla lapho bedinga ukwesekwa, futhi ubakhulumele lapho bephathwa ngendlela engafinyeleli emazingeni ethu
Bona futhi ubonge umsebenzi owenziwe abanikeli:Babonge ngosizo abakunike lona. Yazise imizamo yabo bese unikeza isikweletu lapho kufanele khona.
I-Universal Code of Conduct ihlose ukusiza amalungu omphakathi ukuthi abone izimo zokuziphatha kabi nokuhlukunyezwa. Ukuziphatha okulandelayo kubhekwa njengokungamukeleki ngaphakathi kwenhlangano ye-Wikimedia:
Lokhu kufaka noma yikuphi ukuziphatha okwenzelwe ikakhulukazi ukwesabisa, ukuthukuthela noma ukucasula umuntu. Ukuziphatha kungathathwa njengokuhlukumeza uma kungaphezu kwalokho umuntu olinganiselayo obekulindeleke ukuthi akubekezelele (uma kubhekwa ingqikithi yamasiko nokulindelwe ngabantu abathintekayo). Ukuhlukumeza kuvame ukuthatha isimo sokuhlukumezeka ngokomzwelo, ikakhulukazi kubantu abasengozini.
*Ukuhlambalaza: Lokhu kufaka ukubizwa ngamagama, ukusebenzisa ama-slurs noma imibono eyeqisayo, nanoma ikuphi ukuhlaselwa okususelwa kuzici zomuntu siqu. Ukuthukwa kungabhekisa kuzici ezibonakalayo njengokuhlakanipha, ukubukeka, ubuhlanga, ubuhlanga, inkolo, isiko, ukuhlukaniswa kwabantu ngokobulili, ubulili, ukukhubazeka, ubudala, ubuzwe, ukuzibandakanya kwezepolitiki, noma ezinye izici. Kwezinye izimo, ukuhlekwa usulu okuphikisayo, ukubhuqa, noma ukuhlukunyezwa kungafaneleka njengokuthukwa ngokuhlanganyela, noma ngabe izitatimende zomuntu ngamunye bezingeke.
Ukuhlukunyezwa ngokocansi: Ukunakwa ngokocansi okungacelwanga noma ukuthuthuka kwanoma yiluphi uhlobo kwabanye.
Izinsongo: Kusetshenziswa amathuba odlame lwasemzimbeni, ukuthathelwa izinyathelo zomthetho, ukuphoxeka okungafanele, noma ukulinyazwa ngokwegama ukuwina impikiswano noma ukuphoqa othile ukuthi aziphathe ngendlela othanda ngayo.
Lokhu kukhuthaza ukukhuthaza abanye: Lokhu kufaka ukukhuthaza omunye umuntu ukuthi azilimaze noma azibulale kanye nokukhuthaza umuntu ukuthi ahlasele umuntu wesithathu.
I-Doxing: ukushicilela imininingwane yangasese yabanye, njengegama, indawo yokusebenzela, ikheli lendawo noma le-imeyili, ngaphandle kwemvume ecacile. Njengokwejwayelekile, umuntu akufanele nanini ashicilele imininingwane umuntu azame ukuyigcina iyimfihlo futhi engashicilelwanga ku-inthanethi. Imiphakathi eminingi izoba nezinga eliphakeme kunaleli futhi ithande ukwenqabela ukushicilelwa kolwazi olushicilelwe kwenye indawo kwi-inthanethi kepha kungabelwana ngalo kuphrojekthi ye-Wikimedia.
Ukulandelela: Ukulandela umuntu kulo lonke iphrojekthi nokugxeka umsebenzi wabo kaningi ngenhloso yokubacasula noma ukubadikibalisa.
Ukuphrinta: Ukuphazamisa ngamabomu izingxoxo noma ukuthumela ngokukhohlisa ukuze ucasule othile ngamabomu
Ukuhlukumeza kwenzeka lapho umuntu osesikhundleni sangempela noma esaziwayo samandla, ilungelo, noma ithonya engena ekuziphatheni okungenanhlonipho, okunonya, kanye / noma okunodlame kwabanye abantu. Ezindaweni ze-Wikimedia kuvame kakhulu ukuthatha isimo sokuhlukumezeka ngokomzwelo (ngamazwi, ukuhlukunyezwa ngokomqondo, ngokwengqondo) futhi kungahle kuhlangane nokuhlukunyezwa.
Ukuhlukunyezwa kwehhovisi ngabasebenzi, izikhulu nabasebenzi: ukusetshenziswa kabi kweziphathimandla, ulwazi noma izinsizakusebenza ezinikezwa abaphathi bephrojekthi (abakhethiwe), kanye nezikhulu nabasebenzi be-Wikimedia Foundation noma abasebenzisana ne-Wikimedia ukusabisa noma basongele abanye, noma ngenzuzo yabo uqobo noma inzuzo engabonakali.
Ukuhlukunyezwa kobudala nokuxhumana: Ukusebenzisa isikhundla nedumela lakhe ukwesabisa abanye. Sicela abantu abanolwazi olubalulekile nokuxhumeka emnyangweni ukuthi baziphathe ngokunakekelwa okukhethekile ngoba ukuphawula okungahambisani nakho kungahle kube nomthelela ongahlosiwe wokwakha izinsongo ezivela kubangani nakubasekeli.
Ukukhanya kwegesi (ukukhohlisa ngokwengqondo): Ukusebenza (wedwa noma neqembu) ukudala umuntu ukuthi angabaze imibono yakhe, izinzwa noma ukuqonda kwakhe. Abantu abanegunya lomphakathi banelungelo elithile lokuthi babhekwe njengabathembekile futhi akufanele bakusebenzise kabi lokhu ukuhlasela abanye abangavumelani nabo.
3.3 - Ukucekela phansi okuqukethwe nokuxhashazwa kwamaphrojekthi
Phawula "Ukucekelwa phansi kokuqukethwe nokuhlukunyezwa kwamaphrojekthi"
Ukwethula ngamabomu okuqukethwe okungalungile noma okucheme kumaphrojekthi we-Wikimedia noma ukuvimbela ukwenziwa kokuqukethwe. Lokhu kufaka kepha akukhawulelwe ku:
Ukususwa okuphindaphindiwe kokuqukethwe kwe-Wikimedia ngaphandle kokubuyekezwa kontanga okufanele noma impendulo eyakhayo yokwenza ngcono
Ukuhlela ngokuhlelekile ukuvumela ukuhumusha okuthile kwamaqiniso noma amaphuzu wokubuka
Inkulumo enenzondo nganoma yiluphi uhlobo lwenkulumo ehlose ukuhlambalaza, ukululaza noma ukubhebhethekisa inzondo eqenjini noma esigabeni sabantu ngokobuhlanga, inkolo, ibala lesikhumba, ubunikazi bobulili, ubunikazi bobulili, ubuhlanga, ukukhubazeka, noma imvelaphi yezwe
Ukwengezwa okungavumelekile, okungekho emthethweni kwezimpawu, izithombe, noma okuqukethwe ngenhloso yokwesabisa noma ukulimaza abanye.
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Universal_Code_of_Conduct/Policy_text/zu&oldid=21145209"
Last edited on 24 February 2021, at 00:10
This page was last edited on 24 February 2021, at 00:10.